21:21: Intsingiselo Ngeeyure Ezilinganayo Nakubomi Bethu
kuqala » I-Numerology » 21:21: Intsingiselo kwiiyure Ezilinganayo
I-Numerology yenziwa zizigidi zamanani ahlukeneyo abonakala kuthi ngokuphindaphindiweyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Omnye umzekelo onjalo ngu 21: 21 oko kunako vela ngaxeshanye kwaye oko kunokuba nentsingiselo enomdla kakhulu.
Ngamanye amaxesha, i-numerology ifuna ukusinika iimpawu ezahlukeneyo ngobomi bethu. Zisenokuba ziimpawu ezintle, ezimbi okanye ezingathathi hlangothi.
Kule meko, ukuba uyibona ngokuphindaphindiweyo le nombolo kwindawo ethile okanye ngewotshi, yazi ukuba inentsingiselo ebomini bakho. Siza kuthetha ngayo okomzuzwana, ngoko funda ngononophelo.
Intsingiselo ye-21:21 ngexesha elifanayo nakwezinye iindawo
Okokuqala, kubalulekile ukukhankanya ukuba akukho mfuneko yokuba ubone la manani kwiwotshi yakho. Ukuba uye wayibona kwenye indawo ngokuphindaphindiweyo, unokutolika oku njengophawu.
Kule meko, cinga ukuba umbona rhoqo kumabonwakude, kunokwenzeka ukuba uya kuba nempembelelo ebomini bakho. Ke ukuba ulibonile eli nani ngokuphindaphindiweyo, masijonge intsingiselo yalo.
21:21 : Intsingiselo eqhelekileyo kubomi bethu
Eli nani liza njengesilumkiso kwi ukuvela okanye imfuno yenguqu enkulu ebomini bethu.
Ubomi bethu abuhambi ngendlela esifuna ngayo, kodwa kufuneka senze okuthile ukuze sibutshintshe.
Kwezinye iimeko olu tshintsho lubonakala lungalindelekanga, ngelixa kwezinye luthatha amanyathelo, inkuthazo kunye nesibindi sokwenza ukuba kwenzeke ngokukhawuleza.
Ke, inkangeleko yale nombolo ifuna ukudlulisela kuwe ukuba ubomi bakho bufuna inguqu. Ngoku kuxhomekeke kuwe ukuba iya kubonakala ngokuphindaphindiweyo okanye ukuba kuya kubakho isenzo kwinxalenye yakho.
Intsingiselo kubomi bothando
Ubomi bothando yenye yezona zinto ziceliwe ngabo bonke abafundi bethu. Yinto eqhelekileyo ukuba sonke siyoyika ukuphulukana nomntu esimthandayo okanye ukuqhathwa ngandlel’ ithile.
Inombolo 21:21 ngamaxesha achanekileyo / alinganayo okanye naphina enye indawo inentsingiselo kubomi bethu bothando.
Uzama ukusixelela loo nto kukho into ekufuneka itshintshile ukuze ulonwabo lwenzeke kunye nothando kubudlelwane.
Ukuba awutshatanga, yinto enye. Ibonisa ukuba kufuneka wenze kwaye wenze utshintsho ukuze ekugqibeleni ufumane umntu osecaleni kwakho.
Ngoko musa ukuvumela uloyiko lukubeke kwimeko apho ungenzi nto. Zama ukulwa kwaye utshintshe ubomi bakho bothando, ngamanye amaxesha kuya kufuneka ubeke esichengeni ulonwabo osele unalo.
Okulandelayo, masithethe ngentsingiselo kubomi bakho bemali, qhubeka ufunda.
Intsingiselo kubomi bemali
Ngaba ubomi bakho bezezimali ngendlela obubufuna ngayo? Mhlawumbi akunjalo.
Ayinakutshintsha ngaphandle kokuba utshintshe imikhwa yakho, amasiko akho kunye nezenzo zakho ezimbi.
Kukho izinto ezininzi ezithintela impumelelo yakho kunye nokuvela kobutyebi, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho nto yenziweyo ukutshintsha loo meko. Ke, ukuba ufuna ukuphucula ubomi bakho bezemali, kuya kufuneka wenze umzamo.
Kwakhona, Inguquko enkulu iyafuneka ukuzisa utshintsho. Zama ukuyibangela ngokukhawuleza, ngaloo ndlela utshintsho luya kubonakala ngokukhawuleza.
Kukho abantu abathanda ukwazi imeko yabo yempilo kunye nokubonakala kwezifo ngeempawu zendalo yonke.
Ngelishwa, akukho nto ibonisa ikhonkco phakathi kwala manani kwisimo sakho sempilo okanye impilo yalo naliphi na ilungu losapho okanye umntu omaziyo. Ngoko ke, kuba nzima ukuthetha nawe ngalo mbandela ngokujonga nje la manani aphindaphindiweyo 21:21 .
Ngethamsanqa, la manani alinganayo anentsingiselo kwithamsanqa lethu, kodwa ayisiyiyo eyona ilungileyo kuzo zonke.
Bazama ukudlulisela kuthi ukuba kufuneka silwele ithamsanqa lethu, kuba akazukuvela ngaphandle kotshintsho okanye ukusuka kwenye imini ukuya kolandelayo.
Kuya kuthatha umzamo omkhulu, umzabalazo kunye nokuzinikela kwithamsanqa lakho ukuba litshintshe okanye liqale ukubonakala.
Ngoko ke, musa ukulinda ithamsanqa. La manani afuna ukudlulisela kuwe ukuba kufuneka umlwele kwaye ungalindi.
Ke yenza uninzi lwezi ngcebiso ukuze ithamsanqa lakho ekugqibeleni liqale ukutshintsha. Yenza into, thatha inyathelo kwaye wenze izicwangciso, kuphela emva koko uya kufumana yonke into obusoloko uyifuna.
Okokugqibela, masiqhubele phambili ekubalulekeni kwawo onke amanani eze kuthi. Hayi nje intsingiselo ka-21:21 kwiwotshi kunye nexesha, kodwa nawo onke amanye amanani.
Ngaba kufuneka ndinike ukubaluleka kwintsingiselo yala manani?
Kuyaxhomekeka. Kukho abo bakholelwa ngokwenene ukuba amanani kunye ne-numerology inokusinika ulwazi olubaluleke kakhulu malunga nobomi bethu kwaye ndiyakholelwa ukuba.
Ngoku konke kuxhomekeke kwinto oyikholelwayo nakwindlela ozibona ngayo izinto.
Mna, ngokukodwa, ndikholelwa kakhulu ukuba akukho nto iyenzeka ngamabona-ndenzile kwaye akukho nto yenzekayo ngenxa yokuba yenzeke. Awufumani mnqa ukuba ujonge iwotshi yakho kwaye ubone amanani afanayo ngqo kwicala leyure nakwimizuzu?
Kwaye xa oku kusenzeka ngaphezu kwesihlandlo esinye? Kufuneka sivume ukuba le nto inkulu kakhulu ngengozi, kodwa njengoko besitshilo, wonke umntu ukhululekile ukuba akholelwe into ayifunayo.
Ngaba ngama-21:21 kuphela anentsingiselo ngamaxesha afanayo nakwezinye iindawo?
Musa. Ngokutsho kwezibalo, onke amanani aphindaphindiweyo, alinganayo, ngokuthe ngqo okanye ajikiwe anentsingiselo kubomi bethu.
Uyakwazi ukubona ingcaciso ezininzi zazo kwi inqaku lethu ngamaxesha achanekileyo.
Ke, naliphi na inani elibonakala lingolandelelwano "lilunge kakhulu" okanye lilunge kakhulu ukuba libe yinyaniso linolunye ulwazi elifuna ukulidlulisela kuwe.
Ke ngoko, sicebisa ukuba uqale ukuzihlalutya zonke ngeyona ndlela ilungileyo. Ndikholelwe, ubomi bakho bunokuba buzama ukunika iimpawu ezininzi ezinokutshintsha ulonwabo lwakho!
Iintsingiselo ezingakumbi kwi-numerology:
Fumanisa Okuninzi ngubani umphefumlo wakho ngenyanga yokuzalwa
Fumanisa owayekho kubomi bangaphambili ngokufunda ngamanani
Amanani avela phambi kwethu imihla ngemihla anokuba nemiyalezo efihliweyo ekufuneka siyiveze, ngokuxhomekeke kungqamaniso lwazo. Ke, ungaze usilele ukuzihlalutya zonke ngokupheleleyo.
Ngoku ekubeni uyayazi intsingiselo ye-21:21 ngexesha elinye okanye kwenye imeko, sebenzisa olu lwazi ngeyona ndlela ilungileyo ukuze usebenzise yonke imiqondiso oyifumanayo!
1 Intsingiselo ye-21:21 ngexesha elifanayo nakwezinye iindawo
1.1 21:21 : Intsingiselo eqhelekileyo kubomi bethu
1.2 Intsingiselo kubomi bothando
1.3 Intsingiselo kubomi bemali
1.4 intsingiselo empilweni
1.5 intsingiselo kwithamsanqa
2 Ngaba kufuneka ndinike ukubaluleka kwintsingiselo yala manani?
3 Ngaba ngama-21:21 kuphela anentsingiselo ngamaxesha afanayo nakwezinye iindawo?